बिहे हुन् लागेकी प्रेमिका निधन भएपछि एक्लिएर प्रेमीले भने, ‘तिम्रो लागि रातो साडी किनेर ल्याइदिएको छु बुडी, तिमि कहाँ गयौ’ ? «
बिहे हुन् लागेकी प्रेमिका निधन भएपछि एक्लिएर प्रेमीले भने, ‘तिम्रो लागि रातो साडी किनेर ल्याइदिएको छु बुडी, तिमि कहाँ गयौ’ ?
Published : 24 January, 2020 11:04 pm
कहाँ छस् छिटो आइज न प्लीज । एक चिप्टी सिन्दुरको लागि तैंले आफ्ना आफन्त सबैलाई छोडेर मलाई साथ दिइस् म संग आइस् तर अहिले मलाई बिच बाटोमा छोडेर किन गइस् ? अब यति लामो जिवनको वाटो म एक्लै कसरी हिड्नु ? कति सपनाहरु थिए किन धोका दिइन् ? तँलाई मैले पहिले नै भनेको थिए तलाई केही हुनु पहिला नै म रहन्न भनेर ? मलाई एक्लै किन छोडेर गइस् ? म एक्लै के गरुँ ? छिटो आइज न विवाह गरुँ । मैले ल्याइदिएको यो साडीमा तेरो सिउँदोमा सिन्दुर लगाइदिने सपना छ मेरो । म पनि छिट्टै आउँछु तँ संग बुढी । मलाई नभुलेस् है मलाई पर्खेर बसेस् । म पनि छिट्टै आउँछु तँ संगै चखेवाको जोडी जस्तै थियो हाम्रो माया अब एक गएपछि अर्को आफै आउँछ ।